၉မိုင် အေဝမ်းရှိ အိမ်နှင့်ခြံ အမြန်ရောင်းမည်။
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10016619 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
အင်းစိန်မြို့သစ်စျေးအနီးရှိ အိမ်နှင့်ခြံ အမြန်ရောင်းမည်။
TYM377 For Sale-ရောင်းမည်။ စျေးတန် နေရာကောင်း အိမ်နှင့်ခြံ အမြန်ရောင...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10016601 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
မရမ်းကုန်း၊ မောရဝတီကွန်ဒို (1460 - Sqft) စွယ်တော် ဘုရားဗျူး ရောင်းမည်
မရမ်းကုန်း၊ မောရဝတီကွန်ဒို (1460 ...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10006814 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
မဂ်လာပါရှင့်..🙏🙏 မြောက်ဒဂုံက လုံးချင်းတိုက်လေးကိုတင်ပေးမှာပါ.
မဂ်လာပါရှင့်.. 🙏🙏 #မြောက်ဒဂုံ၃၄ရပ်ကွက...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10003812 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
☃️☃️ #ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန် လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ကွန်တိန်နာများအဝင်အထွက်ကောင်းပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်သင့်တော်‌သော စက်မှုဇုန်မြေ ငှားရန်/ရောင်းရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No. MH - S/R 381/229...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9997585 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10020409 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10020401 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
မြောက်ဒဂုံ နေရာကောင်း ခြံမြေကွက်ရောင်းရန်
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10020386 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ပထမထပ် တိုက်ခန်း အရောင်း
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10020368 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10020356 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10020344 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
#မှော်ဘီမြို့နယ် #မြောင်းတကာစက်မှုဇုန်အနီး ပြည်လမ်းမကြီးမေးတင် နေရာကောင်း#
45,000 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10020321 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္